WhatsApp dia efa mamela antsika hanatevin-daharana antso an-tsary amin'ny fotoana rehetra | Vaovao IPhone
Antso an-tsary nandritra ny areti-mandringana niaina ny tampon'izy ireosatria io no fomba tokana ahafahana mifandray amin'ireo namantsika, fianakaviantsika ary mpiara-miasa aminay. Toy ny hoe natsangana tamin'ny areti-mifindra ilay antso an-tsary rehefa 20 taona mahery izay no niaraka taminay.
Rehefa mandeha ny volana, ireo orinasa manolotra ireo karazana serivisy ireo dia manohy manatsara ireo asa natolotr'izy ireo hanohizany ho safidy ho an'ireo mpampiasa. WhatsApp, ny fangatahana fandefasan-kafatra nataon'i Mark Zuckerberg dia nahazo fiasa vaovao hanolotra fampiasa tsy hita: ny fahaizana midira ho vondrona amin'ny antso efa natomboka.
Tahaka ny efa azontsika natao tamin'ny fampiharana antso sy antso video hafa, manomboka androany dia azo atao izany midira antso anaty vondrona sy antso an-tsary izay nanomboka tsy nisy anay satria mbola tsy nanam-potoana haka sy tsy afaka tamin'io fotoana io izahay, izay ialana amin'ny fanaovana antso an-tsary na antso indray mba ho eo daholo ny mpikambana ao amin'ny vondrona.
Amin'izany fomba izany, raha mbola tsy naheno ny feon'ny antso an-tsary isika, nangina fotsiny ny finday na tonga tara tamin'ny fampandrenesana isika, afaka miditra amin'ilay antso na antso an-tsary tsy misy olana isika, mila tsindrio fotsiny amin'ny fampandrenesana ary tsindrio ny bokotra Miaraha.
Ankoatra izany, ny interface ny antso sy ny antso an-tsary dia novaina, mametraka ny bokotra moana, mampiato ny mpandahateny, mampihetsika sy mamono ilay horonan-tsary, manova fakan-tsary ary mamarana ny antso mankany amin'ny bara farany ambany. Azonao jerena ihany koa ireo olona nasaina hiantsoana na hiantsoana video miaraka amin'ireo olona efa nanatevin-daharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » WhatsApp dia efa mamela antsika hanatevin-daharana antso an-tsary amin'ny fotoana rehetra
Apple manemotra ny fiverenany any amin'ny biraony hatramin'ny Oktobra